Rudiger ga-ahapụ Chelsea na njedebe nke oge – Carinsurancegeeks
Onye na-agbachitere German Antonio Rudiger ga-ahapụ Chelsea mgbe nkwekọrịta ya ga-agwụ na njedebe nke oge, ka Thomas Tuchel kwuru.
Tuchel gbalịrị ime ka Rudiger nọrọ na Stamford Bridge, mana onye na-ahụ maka etiti ahụ kpebiri ịhapụ ụlọ ọgbakọ Premier League ka afọ ise gachara.
Mmachibido iwu gọọmentị Britain na onye nwe Rọshịa Roman Abramovich, nke gụnyere ọnọdụ na ndị egwuregwu dị adị enweghị ike ịbanye n’akwụkwọ nkwekọrịta ọhụrụ, gbochiri mbọ Chelsea iji nọgide na-enwe Rudiger.
A na-eche na Blues ahụ enyela Rudiger nkwekọrịta tupu mmachibido iwu ahụ, mana nkwekọrịta ahụ dara mgbe a rịọrọ arịrịọ maka ntinye aka na ụgwọ ụlọ ọrụ.
Onye dị afọ 29, onye kwagara n’ebe ọdịda anyanwụ London site na Roma na 2017, kwuru na ọ ga-achọ ịbanye na Real Madrid, Barcelona, ​​​​Bayern Munich, na Paris Saint-Germain nwekwara mmasị ịbanye ya na nkwekọrịta ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ.
“Toni, mgbasa ozi dị na ya. Ọnọdụ bụ na ọ chọrọ ịhapụ ụlọ ọgbakọ ahụ. Ọ gwara m na nke a bụ na mkparịta ụka nzuzo, “Tuchel kwuru mgbe mmeri Sunday 1-0 meriri West Ham.
“Anyị nyere ihe niile, mụ na klọb, ma anyị enweghị ike ịlụ ọgụ ọzọ n’ihi omume ahụ. Na-enweghị mmachi ahụ, anyị ga-enwe ike ịlụ ọgụ ma ọ dịkarịa ala, mana ejiri aka anyị kee. Anyị anaghị ewere ya n’onwe anyị. Ọ bụ mkpebi ya.”
Rudiger zụlitere onwe ya dị ka onye na-eme ihe nkiri na-agbachitere Tuchel, ya na ọchịchị ya na omume achọghị ọdịmma onwe ya na-emeri ndị Fans ya.
Ọ nweghị ike isonye na mmeri ha meriri West Ham n’ihi mmerụ ahụ ọ merụrụ, mana o nwere ike na-ekiri egwuregwu ahụ site na nkwụnye.
Tuchel kwetara na ọpụpụ Rudiger ga-abụ nnukwu mfu maka otu klọb meriri Champions League na Club World Cup ekele n’otu akụkụ maka arụmọrụ ya kwụsiri ike.
“Ọ bụ onye isi na ọ ga-anọ otu ahụ ruo njedebe nke oge. Ma ọ na-akụda. Anyị ga-atụ uche ya nke ukwuu, “Tuchel kwuru.
“Ọ na-enye obi ike n’ime ụlọ ejiji. Ụdị onye ọ bụla na-atụ egwu, mana ụdị ịme egwuregwu 50-55 na ọkwa dị ịrịba ama.
“Ọ bụ onye mgbachitere kacha elu n’ime otu afọ na ọkara gara aga maka m. Anyị kwesịrị ịchọta azịza ọzọ.”
by Promise Foster · Published April 12, 2022
A mara ụmụ akwụkwọ abụọ SS3 ikpe afọ 7 maka izu piano ụka
Next story Goolu Pulisic gbagoro n’ikpeazụ ka Chelsea meriri West Ham ndị isi ike
Previous story Kalmar wucewa: Duba Me yasa mutane ke manta kalmar sirri